फेसबुकमै नःग्न भिडियो कल गर्दा यसरी लुटिइन् यी बालिका « Ok Janata Newsportal
फेसबुकमै नःग्न भिडियो कल गर्दा यसरी लुटिइन् यी बालिका
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जले पुस ३० गते २१ वर्षीय सुजन श्रेष्ठलाई ललितपुरको पाटनबाट पःक्राउ ग¥यो । एक नाबालिकालाई जवःरजस्ती करःणी गरी फरार रहेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थायी ठेगाना भई हाल ललितपुरको पाटनस्थित सुन्धारामा बस्ने २१ वर्षीय सुजन श्रेष्ठलाई प्रहरीले पःक्राउ गर्दा भने सौगात महर्जन भन्ने ठानेको थियो । किनभने युवकले आफ्नो नाम सौगात महर्जन रहेको बताएका थिए र एक बालिकालाई डर धम्की देखाई भेट्न बोलाई जवरजस्ती करणी गरेर फरार भएका थिए ।
बूढानीलकण्ठमा बसोबास गरिरहेकी एक १३ वर्षीय बालिकालाई करिब २ महिना अगाडि फेसबुकमा सौगात महर्जनको नामबाट फ्रेण्ड रिक्वेष्ट आयो । भर्खरभर्खर फेसबुक चलाउन सुरु गरेकी ती बालिकाले पनि उक्त फ्रेण्ड रिक्वेष्ट स्वीकार गरिन् । सामान्य कुराकानी हुँदा ती बालिकालाई पनि रमाइलो नै लाग्यो र उनले ती युवकसँग कुराकानी गरिरहिन् ।
कुराकानीकै क्रममा बालिका र ती व्यक्ति ज्यादै नजिक बनिसकेका थिए । अनि एकदिन ती व्यक्तिले बालिकालाई आफ्नो यौःन अङ्गहरु देखाउन आग्रह गरे । बालिकाले आफू सानै भएको भन्दै यौःन अङ्ग देखाउन अस्वीकार गरिन् । तर ती व्यक्तिले आफ्नो पनि यौःन अङ्गहरु देखाउने भन्दै बालिकालाई यौःन अङ्गहरु देखाउन बारम्बार दबाब दिइरहे ।
बारम्बार दबाब आइरहेपछि ती बालिकाले आफ्नो यौःन अङ्गहरु देखाउन थालिन् र नग्ःन भएर भिडियो च्याटमा कुराकानी गर्न थालिन् । यो क्रम केही दिन चलिरह्यो । त्यसपछि ती व्यक्तिले बालिकालाई आफूसँग यौःन सम्बन्ध राख्न आग्रह गरे । तर बालिकाले ती व्यक्तिको प्रस्ताव अस्वीकार गरिन् ।
जब बालिकाले सौगात महर्जन नाम गरेका व्यक्तिको यौःन प्रस्ताव अस्वीकार गरिन्, त्यसपछि ती व्यक्तिले बालिकासँग ब्ल्याःकमेल सुरु गरे । बालिकासँग भएको अश्लीःल संवाद, कुराकानी र नग्न भिडियो बालिकालाई नै पठाएर आफूसँग भेटघाट नगरे ती सबै फोटो र भिडियो भाइरल बनाइदिने धःम्की दिए ।
बालिकाले पठाएको नःग्न फोटो र भिडियोहरु ती व्यक्तिले सेभ गरेर राखेका थिए । त्यतिमात्र नभएर फेसबुकको भिडियो च्याटमा भएका कुराकानी स्क्रिन क्याप्चर गरेर राखेका रहेछन् । अनि त्यही फोटो र भिडियो आफूसँग रहेको भन्दै आफूसँग भेटघाट नगरे ती फोटो र भिडियो स्कुलका साथीभाइ, परिवारका सदस्य आदिलाई पठाइदिने र फेसबुकमै भाइरल गरिदिने धम्की दिए ।
फेसबुकमै चिनजान भएको, कहिल्यै नदेखेको र नभेटेको व्यक्तिले ब्ल्याःकमेल सुरु गरेपछि बालिका आत्तिइन् । एकपटक भेट्ने तर भेटेपछि सबै फोटो र भिडियो डिलिट गरिदिने शर्त राखिन् । ऊ बालिकाको उक्त शर्त मान्न तयार भयो र एकपटक भेटघाट मात्रै गर्ने अनि सबै फोटो र भिडियोहरू डिलिट गरिदिने बतायो ।
त्यसपछि बालिका ती व्यक्तिलाई भेट्न तयार भइन्, त्यो पनि साँझको समयमा ।
बालिकासँग ती व्यक्तिको मोबाइल नम्बर थिएन । न ती व्यक्तिको फोटो नै फेसबुकमा राखिएको थियो । भिडियो च्याटमा कुराकानी गर्दा पनि ती व्यक्ति सकेसम्म आफ्नो अनुहार देखाउन चाहँदैनथे ।
तर पनि आफ्नो इज्जत जोगाउन बालिकालाई ती व्यक्तिसँग भेट्नैपर्ने बाध्यता थियो । बाध्य भएपछि बालिकाले ती व्यक्तिलाई गत पुस २७ गते बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नो घर नजिकै बोलाइन् । २०÷२१ वर्षको जस्तो देखिने एक व्यक्ति बालिकालाई भेट्न आइपुगे । तर ती व्यक्तिको अनुहार पनि उनले राम्ररी चिन्न सकिनन् ।
सडक छेउमै भेट गर्न खोज्दा उक्त युवकले सडक छेउमा भेट गर्न मानेन । बरु बूढानीलकण्ठ नजिकै बन्दै गरेको एक घरमा पछाडि लिएर गयो । अनि त्यहीँ ती बालिकामाथि आफ्नो यौःन हर्कत देखाउन थाल्यो । ती युवकले सुरुमै बालिकाको संवेदनशील अःङ्गहरु सुमसुम्याउन थाल्यो । अनि बालिकालाई जवःरजस्ती करणी ग¥यो । बलिष्ठ २१ वर्षको व्यक्तिले करणी गर्दा १३ वर्षीय बालिकाले प्रतिकार गर्न सकिनन् र चुपचाप रहनुबाहेक अरु विकल्प रहेन ।
जब युवकले करणी गरे, त्यसपछि बालिकाले आफ्नो नःग्न फोटो र भिडियो डिलिट गर्न भनिन् । युवकले त्यस समय अब गरिदिन्छु भनेर त्यहाँबाट निस्किए । तर जब बालिका र ती युवक दुवै आ–आफ्नो घर पुगे, त्यसपछि फेरि सुरु भयो ब्ल्याःकमेल ।
एकपटक भेट गरेपछि फोटो र भिडियो डिलिट गर्ने पूर्व शर्त युवकले मानेन । बरु एकपटक फेरि भेटघाट गरेपछि मात्रै उक्त फोटो र भिडियो डिलिट गरिदिने बतायो । अर्कोपटक भेट नगरे साथीभाइ र परिवारका अन्य सदस्यलाई ती फोटो र भिडियो पठाइदिने धःम्की दिन थाल्यो ।
युवकले झन् झन् ब्ल्याकमेल सुरु गर्न थालेपछि बालिका झनै बढी डिप्रेसनमा पुगिन् । विद्यालयमा पनि उदास भएर बस्न थालेपछि बालिकाकी साथीले कारण सोधिन् । बालिकाले साथीलाई आफ्नो समस्या र अवस्थाबारे सबै बताइन् । ती युवकको कारण आफू धेरै तनावमा रहेको बताइन् । बालिकाको यो कुरा साथी हुँदै बालिकाकै घर परिवारमा पनि पुग्यो । सुरुमा घरमा केही नबताएकी बालिकाले जब घरमा दाइ लगायतले यसबारे सोधपुछ गरे, बालिकाले सबै विषय बेलिबिस्तार लगाइन् ।
त्यसलगत्तै बालिकाको दाइ पीडित बालिकालाई लिएर महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा आएर घटनाका सम्बन्धमा उजुरी गरे । १३ वर्षीय बालिकालाई जवरःजस्ती कःरणी गरेर फरार भएको भनेपछि महाराजगञ्ज प्रहरीले पनि सक्रियता देखायो । अनि खोजी भयो, सौगात महर्जनको ।
पीडित बालिकासँग उक्त युवकको फोटोसमेत थिएन । अँध्यारोमा मात्रै देखेकी हुनाले बालिकालाई युवकको अनुहार पनि याद थिएन । तर पनि फेसबुकमा तिनै युवक सौगात महर्जनसँग उनी कुराकानी गरिरहेकी थिइन् ।
प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि प्रहरीले बालिकालाई नै फेसबुकमा कुराकानी गर्न लगाएर प्रहरीले आरोपीको मोबाइल नम्बर माग्ने कोशिस ग¥यो । तर चलाख आरोपीले मोबाइल नम्बर दिन अस्वीकार ग¥यो । बरु भिडियो कलमै कुराकानी गर्ने, भेट गर्ने बतायो । त्यसपछि प्रहरीले खोजी ग¥यो सौगात महर्जनको ।
युवकले प्रयोग गर्ने सौगात महर्जन नामको फेसबुक आइडीमा पनि अरु कुनै डिटेल्स थिएन । उसले न त कुनै पोष्ट नै गरेको थियो । प्रोफाइल पिक्चरमा पनि आखिर मजा त दुवैलाई त हो नि’ जस्ता अःश्लील शब्दहरु प्रयोग गरिएको थियो र प्रोफाइल पिक्चरमै यौन आशक्ति देखिने प्रकृतिको थियो । प्रहरी त्यही फेसबुक आइडी प्रयोग गर्ने युवकको खोजीमा जुट्यो र, विविध विधि प्रयोग गरेर उजुरी आएको २४ घण्टाभित्रै प्रहरी आरोपी युवकसम्म पुग्न सफल भयो ।
ललितपुरको पाटन सुन्धारा पुगेर प्रहरीले सौगात महर्जन नाम बताउने सुजन श्रेष्ठलाई पुस ३० गते पक्राउ गर्न सफल भयो । वास्तवमा आफूलाई सौगात महर्जन भनेर चिनाइरहेका व्यक्ति थिए, पनौती नगरपालिका १ का २१ वर्षीय सुजन श्रेष्ठ ।
नाबालिकालाई कःरणी गरी फरार भएका व्यक्ति अन्ततः पक्राउ प¥यो र यतिबेला महानगरीय प्रहरी बृत्त महाराजगञ्जको हिःरासतमा छ । सौगात महर्जन नाम बताउने सुजन श्रेष्ठमाथि यतिबेला प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । रातोपाटी
युटुवरजस्तै नगरी सत्य समाचारले करोडौ कमाए….
सरकारी विद्यालयमा भारी बिदा
२८ बैशाख २०७९, बुधबार
ईदका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय
१९ बैशाख २०७९, सोमबार
आइजीपी थापासहित प्रहरीका १९ कमाण्डर अवकाशमा
महिला सशक्तिकरण आजको आवश्यकता
दिपायल–सिलगढी नगरको मेयरमा एमालेबाट शालीन नेता मलासी उम्मेद्वार
कर्मचारीहरुले १४ दिन भन्दाबढी बिदा लिन पाउने, यस्तो
असल मान्छे कसरी बन्ने ?
बोगटान–फुड्सिल गाउँपालिकामा अध्यक्षको मनपरी, आफ्नालाई पोषणैपोषण
©2022 Ok Janata Newsportal | Website by appharu.com